Saturday January 13, 2018 - 09:55:48 in Wararka by Super Admin
Waaarada ayaa sidoo kale warbaahinada dowladda iyo kuwa maxaliga u qeybisay sawirro ay ku sheegtay in ay ka soo qaadeen saldhigga la weeraray.
Baaritaan ay sameysay Shabakadda SomaliMeMo waxay ku ogaatay in dhamaan sawirada ay faafisay dowladda Somaliya ay yihiin kuwa ay horay u faafisay Al-Shabaab oo laga soo xaday warbaahinta Islaamiga marka laga reebo hal sawir oo isna ah sawir hore kaas oo ay ka soo muuqanayaan ciidamo ka tirsan DF oo jooga xeebta Baraawe.
Sawirrada ay faafiyeen warbaahinada maxaliga iyo kuwa warbaahinta DF-ka ayaa ah Sawiro ay faafisay Al-Shabaab 7dii August,2017 kuwaas o dhamaantood laga heli karo warbaahinada Islaamiga iyo kuwa maxalliga.
Sawiradan waxaa bishii August laga soo qaaday degmada Leego saacado un ka dib markii ay ka baxeen ciidamada AMISOM, lana wareegeen dagaalyahanada Al-Shabaab.
Halkaan Ka Eeg Sawiradaas ay xadeen oo dhammeystiran
Warbaahinta DF-ka wasiirrada iyo dhammaan madaxda dowladda ayaa ah kuwa Beenaalayaal ah oo aan wax sumcad ah laheyn marwalbana waxay faafiyaan warar aan sal iyo raad laheyn balse iyaga uunbay fadeexad ku tahay.
Hoos Ka Daawo Sedaxda Sawir ee Wasaarada G/dhigga ay Xadday kuna sheegtay Burburinta saldhiggii Alshabaab ee Leego.